မောင်… မောင် လို့လူ…. – TodayZ
မောင်… မောင် လို့လူ….
မောင်….မောင်နဲ့ဝေးနေတဲ့အချိန်မှာ ကျွန်မလေ မောင်ရဲ့တန်းဖိုးတွေ,အချစ်တွေ,လွမ်းစွတ်တောင့်တမှုတွေနဲ့အတူရှိနေခဲ့ရတယ်။မောင်နဲ့ ကျွန်မအသက်အရွယ်ကွာဟမှုကြောင့် လူတစ်ချို့က,,, လူအများစုလို့ပြောရင်ပိုမှန်ပါလိမ့်မယ်, လူအများစုက လှောင်ချင်၊ပြောင်ချင်ကြပြီး မိန်းကလေးကအသက်ကြီးနေရင်အပြစ်တစ်ခုလို ပြောချင်ဆိုချင်ကြတယ်။ တစ်ချို့ဆိုရင် မကြားဝံ,မနားသာစကားတွေနဲ့နောက်ကွယ်မှာ ပါးစပ်အရသာခံပြီးပြောနေကြလေရဲ့.
ကျွန်မက ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလိုတာထက်ပိုပြီးဂရုမစိုက်တက်တဲ့သူမို့ သူတို့ရဲ့စကားတွေကို အမှိုက်တွေလို့ပဲသတ်မှတ်ထားတယ်။အခုအချိန်မှာ မောင်ကိုလွမ်းတဲ့အကြောင်းတွေကို အခင်ဆုံးဆိုတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကိုတောင် ရင်မဖွင့်ဖြစ်ဘူး, ဘာကြောင့်လည်ဆိုတော့ သူတို့က သူတို့ထက်ငယ်တဲ့ သူတွေနဲ့ချစ်သူမဖြစ်ဘူးလို့ပဲ,,ကိုယ်ရင်ဖွင့်တဲ့အခါ နားထောင်ပေးကြမယ်ဆိုတာ သိပေမဲ့လည် အချစ်၊အလွမ်း၊ဝေဒနာတွေက သူတို့မခံစားဘူးတဲ့ ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတော့ သူတို့နားလည်နိုင်မယ်မထင်ဘူး…မောင်…
အလွန်အမင်း သည်းခံခြင်းသည် ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှ လူများကို ပျက်စီးစေတတ်သည်…